Nepal Dayari | अमलकी एकादशीमा श्रीहरिको आशीर्वाद पाउन अपनाउनुहोस् यी चमत्कारी उपाय, दुख र पीडा नजिक आउँदैन !
असार ९, २०७९ बिहिबार ३० पटक हेरिएको
फाल्गुन शुक्ल पक्षको एकादशीलाई अमलकी एकादशी भनिन्छ । यसपटक अमलकी एकादशी चैत १४ गते सोमबार परेको छ । यस दिन भगवान विष्णुको साथमा गुराँसको रुखको पनि पूजा गर्ने विधि छ । यो एकादशीलाई अमलकी एकादशी र रंगभरी एकादशी पनि भनिन्छ। पञ्चागका अनुसार एकादशी 13 मार्च बिहान 10.21 बजेदेखि प्रारम्भ भई चैत 14 गते दिउँसो 12.55 मिनेटसम्म रहनेछ। यसपछि द्वादशी तिथी सुरु हुन्छ।
अमलकी एकादशीका दिन केही उपाय गर्नाले मानिसको जीवनका सबै समस्या र समस्याबाट मुक्ति मिल्छ । यस दिन सुख-समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि केही उपाय अपनाउनु पर्छ। आउनुहोस् जान्नुहोस् आजको दिनमा गर्न सकिने उपायहरु ।
अमलकी एकादशीको दिन गर्नुहोस् यी उपाय !
भगवान विष्णुलाई पहेँलो फूल धेरै मन पर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ । त्यसैले अमलकी एकादशीको दिन २१ पहेँलो फूल चढाउनुपर्छ । माला बनाएर पनि यी फूलहरू चढाउन सक्नुहुन्छ। यसो गर्नाले भगवान विष्णुको कृपा भक्तहरुमा सदैव रहन्छ ।
पूजाको समयमा पहेँलो कपडामा एक नरिवल राखेर बेरेर राख्ने मान्यता छ । पूजा गरेपछि यसलाई सफा ठाउँमा राख्नुहोस्। यसबाट लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
जागिर वा व्यापारमा आउने समस्यालाई हटाउन अमलकी एकादशीको दिन काँचोको रुखमा धेरै पानी चढाउनुपर्छ ।
अमलकी एकादशीका दिन गुराँसको रुखको पूजा गरी परिक्रमा गर्दा धागोले सात पटक बेर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईंको जीवनसाथीको हरेक इच्छा पूरा हुने वरदान प्राप्त हुन्छ।
घरमा सुख-समृद्धि कायम राख्न भगवान विष्णुलाई चन्दनको तिलक लगाउनुहोस्।
भगवानको पनि ध्यान गर।
सबै मनोकामना पूरा गर्न र श्रीहरिको आशीर्वाद प्राप्त गर्न रुमाल बराबरको सफा पहेँलो रंगको कपडा काट्नुहोस्। त्यसको वरिपरि बोका राखी एकादशीमा भगवान विष्णुको चरणमा अर्पण गर्नुहोस्।
Disclaimer:यहाँ प्रदान गरिएको जानकारी केवल अनुमान र जानकारीमा आधारित छ।